Ngo-Agasti, ngokokuqala ngqa kulo nyaka, kube nokwenyuka kokuthengiswa kwezitolo eChina. Ngo-Agasti, ngokokuqala ngqa ngo-2020, kwaba nokwanda kokuthengiswa kwezimpahla zabathengi eChina, okuyisibonakaliso esikhulu sokukhula kokusetshenziswa, njengoba kufakazelwa yidatha ekhishwe ngoSepthemba 15 nguMbuso ...
I-PRC INGADALA IZINDAWO EZINTSHA ZOKUHWEBULA ZAMAHHALA.
Izindawo ezintsha zokuhweba mahhala kungenzeka zivele ezifundazweni zaseHeilongjiang naseXinjiang Uygur esifundeni sePRC esisemngceleni weRussia. Izindawo kulindeleke nokuthi zisungulwe esifundazweni saseShandong. Kunamathuba amaningi okuvela kwe-FTZ esifundazweni sase-Hebei esiseduze neBeijing - kuphakanyisiwe ...
IHuawei iba ngumkhiqizi we-elekthronikhi obiza kakhulu eChina ngo-2020
IHuawei isiphenduke inkampani enkulu kunazo zonke yabathengi baseChina. Lokhu kubikwa ngumagazini waseShanghai i- "Huzhun" ngokuya ngemiphumela yocwaningo. Imali yeHuawei ilinganiselwa ku-1.1 trillion yuan ($ 163.8 billion).